The Institute for the Study and Treatment of Pain - ZULU - Kuyini IMS? GunnIMS: esicutshini Ingqondo
ZULU - Kuyini IMS? GunnIMS: esicutshini Ingqondo
Kuyini IMS? GunnIMS: esicutshini Ingqondo
Leli khasi okusheshayo elihunyushwe usebenzisa i-Google Translate, ikhompyutha elakhiwe umzamo ngesikhathi ukuhumusha ulwazi olubalulekile ukunakekelwa kwezempilo emphakathini. Sebenzisa eyehlayo ibhokisi phezulu ngakwesokudla kwanoma iliphi ikhasi lewebhu ukuhumusha ulwazi luvele ngolimu oluncamelayo. Uma unemibuzo, sicela uxhumane nathi ukuze ucele usizo. Siza uxolele + ngabe amaphutha typographical, ngempela abantu abahumushi sokuzithandela kuthiwa bawazisa kakhulu; )
Kuyini Gunn IMS? Gunn esicutshini Ingqondo
Supersensitivity futhi imisipha kokunciphisa asikwazi eziqhutshwa futhi 'anqamula,' kuyilapho 'amaphilisi ezinhlungu' nezinye amaphilisi analgesic imaski ubuhlungu (ngokuvamile kabi) kuphela ukukhuthaza ubuthi, unezela le nkinga. Peripheral kuphela esabela okokufaka ngokomzimba zamandla.
Esicutshini Ingqondo (IMS) kuyinto uhlelo Imininingwane ukuze kuhlonzwe kanye nokwelashwa myofascial ubuhlungu syndromes (izimo ubuhlungu chronic ezenzeka uhlelo zemisipha uma kungekho uphawu esobala yokulimala noma ukuvuvukala). IMS lihlala Western Medical Science, futhi isisekelo esiqinile imodeli yayo radiculopathic ubuhlungu, manje okusekelwa ochwepheshe abaningi emkhakheni. Lwakhiwe nguDkt Gunn ngesikhathi udokotela ngesikhathi Isisebenzi sika Isinxephezelo Board of British Columbia ngawo-70, lapho wenza uphenyo inani elikhulu amacala engaqondakali nenkani ngemva ukukhungatheka ne Timiso ayizwakali akhe khucululwa. Le nqubo yokwelapha, okuyinto isebenzisa izinaliti zokutshopa ngoba yiwona enza amathuluzi thinnest etholakalayo ukuthi zenzelwe engena ijule ngaphakathi kwemisipha izicubu, uhlasela ngokukhethekile imisipha abalimele ukuthi isifo futhi babe mfushane ekucindezelekeni.
IMS uncika kakhulu ukuxilongwa okujuli- zomzimba zogulayo omunye udokotela abanekhono, abaqeqeshiwe ukuqaphela izimpawu zabo ezingokomzimba ubuhlungu neuropathic. Lokhu behlolwa lubaluleke kusukela ubuhlungu chronic ngokuvamile zezinzwa njengoba kuqhathaniswa kwesakhiwo, futhi ngenxa yalokho, engabonakali ezibizayo X-ray, i-MRI Uvivinyo, Bone nakuma-CT Scan. Ukwehluleka lemi izimpawu kuyophumela uphethwe olungalungile, futhi ngaleyo ndlela, ompofu yokuqalisa ukulapha umzimba.
I yokwelapha ihilela needling owomileyo ube yiziphethu ezindaweni ezithintekile komzimba ngaphandle ujova iyiphi into. Amasayithi inalidi ikwazi ukuya kube yiyo eshayeka kanzima ngenxa iqine, ububele imisipha bands, noma kungaba eduze komgogodla lapho kungenzeka impande emsipheni acasuke futhi supersensitive bona. Ukungena imisipha ovamile kobuhlungu; Nokho, i-mfushane, imisipha supersensitive ngeke 'bamba' inaliti kulokho lingachazwa ngokuthi umuzwa cramping. Umphumela mithathu. Enye, yokwamukela elula e imisipha ziyashukumiseka, esikhiqiza ukuphumula reflex (kwelulwa). Ababili, inaliti futhi kubangela ukulimala ezincane ukuthi udonsa igazi endaweni, eziqalisa yemvelo inqubo yokwelapha. Three, ukuphathwa lidale ezingaba kagesi imisipha ukwenza umsebenzi nerve evamile futhi. Inalidi elisetshenziswa IMS, by inkanuko imisipha nokwakha uthi lokuphotha, ngokuyisisekelo kuba ithuluzi othize futhi ehlukile sitholakele Neuropathic Muscle Pain.
Umgomo kwelashwa ukukhulula imisipha kokunciphisa, okuyinto ngazo futhi luthinta emsipheni. izindawo Supersensitive kungenziwa ngisaba nozwela, futhi wokudonsa eziphikelelayo imisipha mfushane kungenziwa ikhishwe. IMS siyasebenza kakhulu sokukhululwa imisipha mfushane ngaphansi contracture, kanjalo abuhlungu mechanical kusuka imisipha silingo. IMS Empeleni, ephatha eyisisekelo isimo neuropathic elibangela ubuhlungu. Lapho ngokuphumelelayo kwenziwe, IMS has a emangalisayo ukuphumelela rate, njengoba kungase kutholakale by the amelioration izimpawu nezibonakaliso, ngisho obungapheli emuva ngezibonakaliso impande.
IMS emadanisekako ezinye izindlela ukutshopa; Nokho, kukhona eziningi umehluko obalulekile. IMS kudinga ngihlolwa kanye ukuxilongwa omunye udokotela onolwazi nokwakheka, izinaliti okufakiwe kuboniswe izimpawu emzimbeni futhi engahambi ngokwesiko achazwe, meridians non-yesayensi, lapho imiphumela subjective futhi umgomo kuvame wazibonela ngokushesha.
Amagama abalulekile: esicutshini ukushukuma, esicutshini, IMS, cgims, Gunn IMS, needling ezomile, ukutshopa, inhlamvu iphuzu, ubuhlungu myofascial
I-Institute for the Study and Ukwelashwa Pain (iSTOP)
THOLA CGIMS Practitioner - INTERNATIONAL Isiqondisi